Man United oo xiiseyneysa ninka lagu niinaaso ‘Messi-ga cusub’ Halilovic. - Caasimada Online
Home Warar Man United oo xiiseyneysa ninka lagu niinaaso ‘Messi-ga cusub’ Halilovic.
Man United oo xiiseyneysa ninka lagu niinaaso ‘Messi-ga cusub’ Halilovic.
Manchester United ayaa diirada saaratay ninka lagu naaneyso Messi-ga cusub ee Alen Halilovic waxaana wararka xanta ah ay sheegayaan inuu usoo dhaqaaqo Old Trafford, sida uu qoray wageyska Daily Mirror.
Waxaa ninakaan si gaar ah loola barbar dhigaa weeraryaahanka kooxda Barcelona Lionel Messi.
Kubad sameeyaha kooxda Dinamo Zagreb ayaa ah keliya 16 jir wuxuuna ka ciyaaraa booska uu kaciyaaro ninka ay isku wadanka yihiin ee Luka Modric.
Tababaraha meesha fog wax ka arka Sir Alex Ferguson ayaa dhiiri gelinaaya in da’yarkaan Halilovic uu kusoo biirsho kooxdiisa United.
Laakiin ciyaaryahanka ayaa sheegay inuusan hada maanka ku heyn inuu aado koox kale balse uu doonayo inuu diirada saaro u ciyaarista Zagreb: “Sheekada ku sabsan Manchester United? Wax badan masii fiirin wararka xanta ah. . Dinamo Zagreb ayaana go’aan ka gaari doonta waxa dhacaaya.
“Waxaan isku deyayaa inaan kor isku qaado inta karaankeyga ah – wax walba oo kale hada ima quseeyaan.”